चट्टानी ग्रह: विशेषता र वर्गीकरण | नेटवर्क मौसम विज्ञान
हामीलाई थाहा छ सौर प्रणालीमा दुई प्रकारका ग्रहहरू छन्। एकातिर, हामीसँग छ वायु ग्रहहरू जुन चट्टानी कोर र ग्यासले बनेको ठूलो वातावरणको मिलेर बनेको छ। अर्कोतर्फ, हामीसँग छ चट्टानी ग्रहहरू। आज हामी यी प्रकारका ग्रहहरू र उनीहरूको वर्गीकरणको बारेमा कुरा गर्ने छौं। त्यहाँ ग्रहहरू वर्गीकृत गर्न धेरै तरिकाहरू छन्, तर हामी यसमा ध्यान दिन गइरहेका छौं।
यस लेखमा हामी तपाइँलाई चट्टानी ग्रहहरूको सबै विशेषताहरु र वर्गीकरण बताउन जाँदैछौं।
1 चट्टानी ग्रहहरूका विशेषताहरू
2 सौर प्रणाली को चट्टान ग्रहहरु
चट्टानी ग्रहहरूका विशेषताहरू
यी सबै ग्रहहरू सूर्यको चारैतिर घुम्दछन् र त्यहाँ are छन्। तिनीहरूलाई सौर्य प्रणालीको स्थलीय वा टेल्यूरिक ग्रहहरूको नाम पनि दिइयो। यी plane ग्रहहरू निम्नानुसार छन्: बुध, शुक्र, पृथ्वी र मंगलक्रमशः क्रमशः सूर्यसँग तिनीहरूको निकटताका अनुसार। तिनीहरूलाई भित्री ग्रहहरू पनि भनिन्छ किनभने तिनीहरू क्षुद्रग्रह पट्टीमा छन्। यो विभाजक रेखा हो जुन चट्टानको ग्रहलाई गैसियसबाट विभाजित गर्दछ। यो जान्नु आवश्यक छ कि कुन ग्रहले कुन चट्टाने संरचना बनाउँदछ। उत्तर यो छ कि तिनीहरू मुख्य रूपमा सिलिकेटहरू द्वारा गठन गरिएको हो।
सिलिकेटहरू सबैभन्दा प्रचुर मात्रामा खनिजहरू हुन् जुन अस्तित्वमा हुन्छन् र महान भौगोलिक महत्त्व राख्छन्। यो किनभने तिनीहरू पेट्रोजेनिक हो, यसको मतलब तिनीहरू चट्टानहरू गठन गर्ने खनिजहरू हुन्। यो उल्लेखनीय छ कि रक र खनिज एकै हुँदैनन्। गैसीयहरू भन्दा चट्टानी ग्रहहरू छुट्याउने प्रमुख तरिका तिनीहरूको सतहमा छ। वायु ग्रहहरूको एकदम उल्टो, चट्टानी ग्रहहरूको प्राय: ठोस सतह हुन्छ। एक मात्र ग्रह ढु plane्गाका ग्रहहरूमा फेला पर्‍यो र एक तरल सतह हिस्सा हाम्रो ग्रह छ।
महत्त्वपूर्ण कुरा, तिनीहरू सतह मुनि एक साझा संरचना साझा। ती सबैसँग मेटलिक कोर हुन्छ जुन प्राय जसो फलामले बनेको हुन्छ। तिनीहरूसँग सिलिकेटहरू मिलेर तहहरूको शृंखला पनि छ जुन भित्री कोर वरिपरि छ। ती सबैमा केहि समानता छ र यो एक कॉम्प्याक्ट चट्टानी सतह हो र यही कारण यो हो कि यी सबै ग्रहहरूमा स्थलीय सतह छ भनिन्छ।
ती सबैमा पदार्थको धेरै उच्च चयन छ जसको मतलब यसले यूरेनियम, थोरियम र पोटेशियम जस्ता उत्पादनहरूलाई जन्म दिन्छ। तिनीहरूसँग अस्थिर केन्द्रक पनि छ जसले घटनाको कारण गर्दछ रेडियोधर्मी विखंडन। यो निश्चित रूपमा यो गतिविधि हो जसले ज्वालामुखीवाद र महत्त्वपूर्ण टेक्टोनिक प्रक्रियाहरू उत्पन्न गर्दछ। सबै चट्टानी ग्रहहरू प्लेट टेक्टेनिक्स ग्रह पृथ्वी जस्तै समान छ।
सौर प्रणाली को चट्टान ग्रहहरु
हामी सूचीमा गइरहेका छौं जुन सौर्यमण्डलको चट्टाने ग्रह र तिनीहरूको मुख्य विशेषताहरु हुन्। अर्डर सूर्यको निकटतामा आधारित हुनेछ।
यो ग्रह हो जुन सूर्यको सबैभन्दा नजिक परिक्रमा गर्दछ। थप रूपमा, यो सम्पूर्ण सौर्यमण्डलमा सबैभन्दा सानो हो। यो चन्द्रमा भन्दा आकारमा ठुलो छ तर हामी यहाँ जान्न सक्दैनौं कि यहाँ बस्नु कस्तो हुन्छ। सम्पूर्ण सतह ढुy्गाको छ। यदि हामी त्यहाँ बस्यौं भने, हामी आकाश माथि हेर्छौं र देख्न सक्छौं कि सबै फरक छ। सबै भन्दा पहिले छ सूर्य हामीलाई दिउँसो दुई आकारको आकारमा देखा पर्दछ। यद्यपि सूर्य बुधको नजिक छ, आकाश सधैं कालो हुनेछ किनकि यससँग यस्तो वातावरण छैन जुन प्रकाशमा पृथ्वीमा जस्तो घट्ने गर्दछ।
यस ग्रहको बारेमा एउटा जिज्ञासु तथ्य यो छ कि यो सानो भएको बावजूद यो आफ्नो अक्षमा धेरै बिस्तारै घुमाइएको थियो। र यसको अक्ष चालू गर्न साढे days 58 दिन लाग्छ। उसले यसलाई छिटो गर्थ्यो, तर सूर्यको नजीकको निरन्तर प्रभावले उसलाई सुस्त बनाउँदैछ। यसमा कुनै उपग्रह छैन।
यो सौर्यमण्डलमा सूर्यको सबैभन्दा नजिकको दोस्रो ग्रह हो। यसको पृथ्वीसँग समान विशेषताहरू छन् किनकि यससँग समान द्रव्यमान, घनत्व र भोल्युम छ। हामीलाई फरक पार्ने एउटा चीज यो हो कि पहिलेको कुनै सागर हुँदैन। यो एक घन वातावरण छ कि एक उच्च ग्रीनहाउस प्रभाव को कारण गर्दछ औसत तापमान 480० डिग्री बढ्छ। यसले जीवनलाई बनाउँछ जस्तो कि हामी जान्दछौं विकास गर्न असक्षम छ। यो नोट गर्नु पर्दछ कि यो ग्रह आफ्नै अक्षमा एकदम बिस्तार घुमाउँदछ। शुक्रमा दिन एक वर्ष भन्दा बढी रहन्छ।
अर्को उत्सुक तथ्य यो हो कि यो घुमाउँदा, यसले अन्य ग्रहहरू बाट विपरित दिशामा गर्छ। यस कारणले गर्दा, शुक्रमा सूर्य पश्चिममा उदाउँदछ र पूर्वमा सेट हुन्छ।
यो हाम्रो ग्रह हो र यो सूर्यको तेस्रो नजिक हो। आज बस यो एक मात्र बास गरेको छ भनेर जानिन्छ। यसको विशिष्ट स्थानले हामीलाई जीवन सिर्जना गर्न आदर्श अवस्थाहरू गर्न मद्दत गर्दछ। यो क्षेत्र पारिस्थितिक क्षेत्र को रूप मा परिचित छ र यो अन्तरिक्ष हो जुन सूर्यको वरिपरि छ जुन जीवनको लागि सबै उपयुक्त शर्तहरू पूरा गर्दछ.
हामीलाई थाहा छ, हाम्रो ग्रह वायुमण्डलमा बनेका ग्यासहरूका विभिन्न तहहरू मिलेर बनेको छ। यी ग्याँसहरूले सूर्यको किरणहरू फिल्टर गर्न सक्छन् र दिनमा सतह धेरै तातो हुन वा रातमा धेरै चिसो हुनबाट रोक्न सक्छन्। यसले प्रकाश छरितो र तातो अवशोषित गर्न सक्दछ, स्थिर तापमान कायम गर्न पर्याप्त हरितगृह प्रभाव सिर्जना गर्न। हाम्रो ग्रहको बारेमा ध्यान दिनुहोस् कि १० मध्ये parts भाग पानीले बनेको छ। वास्तवमा यो समुद्र र सागरहरू हो जसले वातावरणको तापक्रम नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ। पानी चक्रलाई धन्यवाद, जीवन सिर्जना गरियो।
चट्टानी ग्रहहरू भित्र यो अन्तिम दूरीको ग्रह हो। यो यसको टोनको लागि रातो ग्रहको रूपमा चिनिन्छ। यो एक धेरै राम्रो वातावरण छ र मुख्यतया कार्बन डाइअक्साइड बाट बनेको छ। यो कार्बन डाइअक्साइड प्रत्येक खम्बामा वैकल्पिक रूपमा स्थिर हुन्छ। योसँग पनि पानी छ तर ०.०0.03% मात्र। यसले पृथ्वीमा पानीको मात्रा भन्दा हजार गुणा कम बनाउँछ।
बिभिन्न अध्ययनहरूले देखाउँदछ कि यस ग्रहमा बादल र वर्षाको साथ अधिक संक्षिप्त वातावरण थियो जसले नदीहरू बनाउँदछ। यो सबै यसको सतह मा ग्रूवहरू, टापुहरू र तटहरू छन् कि दिइएको छ। तापमानमा ठूलो भिन्नताहरू राखेर, यसले धेरै कडा बतासहरू दिन्छ। माटोको क्षरणले धुलो र बालुवाको तूफानलाई मद्दत गर्दछ यो अधिक र अधिक ग्रह को सतह अपमान छ.
म आशा गर्दछु कि यस जानकारीको साथ तपाईले चट्टानी ग्रहहरु र तिनीहरुको विशेषताहरु को बारे मा अधिक जान्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » खगोल विज्ञान » चट्टानी ग्रहहरू